The Hottest SEO Trends Muna 2017: Insight From Semalt
Muna 2017, matsva ekutsvaga kutsvakurudza maitiro akabuda. Kuchinja uku kunoteverachiziviso chetsika itsva yegorgorithm yakagadzirwa neGoogle. Nheyo yacho inopa huwandu hwe SEO zvimwe zvakadai sehuwandu hwehupenyu uyekukoshesa pamwe chete nemagadzirirwo eshamwari anoshanda. Panguva imwecheteyo, maitiro ekare akadai se keyword stuffing ave achionekwa sehombodo tsvukumidziyo, inokonzera kurangwa.
Nik Chaykovskiy, nyanzvi ye Semalt Digital Services inopa dzimwe maonero eSeO, izvo zvinogona kuita kuti webhusaiti yako iite nokukurumidza gore rino - rtg free no deposit codes.
1. Anotarisira Kuenderera Mberi Kunowedzera Mberi
Google iri kushandiswa neshamwari dzemafoni. Mumakumi maviri emakore adarika,serofoni dzave dzichinyatsotora mahwendefa pakutsvaga internet. Kubvira muna 2015, Google yakashambadzira kuti webhusaiti yehufambidzani yehutanoingadai iine maitiro eGoogle kuti aite mawebhusayithi. Uyezve, mawebsite asina hukama hwehutachiona hwehutachiona arikugamuchira achirango chekuwana zvikamu zvakaderera. Google yakaratidza zvakare kuti ichakurumidza kuparadzanisa kuongororwa kwemasayiti efoni uye desktop. ForIchi chikonzero, munhu kuvaka mawebsite anofanira kuita kuti vave neshamwari dzakanaka, kugadzirisa kutsvaga kwemafoni uye kuwedzera kusateerera kwenzvimbo. Iyo nhamba yefaira ichaita kuti mawebhusayithi akadaro ave akakwirira.
2. Anotarisira Mamwe Masitemu Kuti Atore Akawedzerwa Mobile Mapepa (AMPs)
Kubva muna 2015, AMP yave iri mafambiro kana zvichiitika pakuvandudza mapeji ewebhunokuda kwevashambadziri. Kubvira pakufamba kwechirongwa chekubatsira kwemafoni, AMP ndiyo imwe yenzira dzekuita nechokwadi kuti webhusaiti ine UEO..AMPs inotakura kusvika ku5 zvakakurumidza uye panguva imwe chete, inochengetedza kushandiswa kwemashoko kusvika kusvika 8 nguva iyo nzira dzemazuva ese dzekushandisa.
3. Kukosha kweKushandiswa kweVashandisi Vekushandisa (UEO) Kukura
Google inopa vatengesi vepaIndaneti uye vanovaka webhusaiti kuti vanyanye kusimbisapakuvaka mawebsite webhu. Google inotsigira pane zvimwe zvinhu zvakadai sekusava nyore, nyore nyore kushandisa, kufamba nekusvikika. Nzvimbo inofanira kupaiyo user unyanzvi hwakanaka hwekutsvaga iyo kuti utange kutanga mujini yekutsvaga.
4. Kutsvaga Kwemashoko Zviri Pakukwira
Izwi rinotsvaga riri kutora seimwe yenzira dzekutsvaga.Isofisi yakafanana neSiri, Cortana neGoogle Now inoshandisa mirairo yezwi yekuisa mibvunzo yekutsvaga mujini yekutsvaga. Vashanduri vewebhu vanofanira kutangakupinda munharaunda iyi itsva kunyanya nekusimudzirwa kwezvigadzirwa uchishandisa up Internet yakafanana neTV TV.
5. Zviripo Zviripo Iye zvino Tsvaga Chinangwa-Chinonyanya Kuiswa
SEO yave ichitsvaga mazwi ekutsvakurudza. Zvisinei, Google iri ikozvino kutsvaga kutsvaga.Google ichagadzirisa zvigadzirwa zvine ruzivo rwakanyanya pakati pevateereri. Zvinyorwa zvakadai sekunowedzera kuwanda, nguva yekubatana uye mapeji akashanyiraichava zvimwe zvezvinhu zvakasimudzirwa pamapeji ekutsvaga maGoogle injini (SERPs).
Somutengesi wemagetsi, munhu anofanirwa kuramba akasvinurira uye akagadzirira kugara nekuchinja. Kwegore rino, zvigadzirisho zvakawanda zvakagadzirwa nemhando dzakawanda dzekutsvaga injini. Kubva pane AMP inoshandiswa kune mobile-first SEO. Izvi zvinoshandurwavakaita mitezo yakasiyana-siyana kuti ichinje shanduro yekutsvaga injini tsika. Kutevedzera zano rinotaurwa pamusoro, munhu anogona kunge akagadzirirashanduko iyo inoguma pakugamuchira nzvimbo yakanaka pane zvinjini.